Misaotra ny fanadihadiana.
Stainless vy izahay sy ny mpanamboatra firavaka wholesaler, ka ny TNR dia USD 300, 3 pcs isaky ny famolavolana isaky ny habeny.
Fa raha tena mila santionany mba hizaha toetra, dia afaka hanafatra USD 100, fara fahakeliny, ny fandefasana vola dia momba ny USD 30 ny 1 kg.
Maniry tsara kokoa isika dia afaka manorina raharaham-barotra sy ny fisakaizana.
foana izahay manana olona eo amin'ny tanana mba hamaly ny fanontaniana. Mino isika fa amin'ny fotoana nilany azy ny mpanjifa, ka dia hanao izay rehetra azo atao mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Raha toa ka misy olana, fanehoan-kevitra, na ny soso-kevitra, dia mifandraisa aminay.
mpikambana Level: (accoring ny mba vola, dia hanana sehatra hafa disccount)
Ary izahay efa nahazo baiko bebe kokoa isan'andro, dia nanitsy ny dingana miasa mba manome asa fanompoana tsara kokoa ho an'ny mpanjifa, ary ho azo antoka ny mpanjifa afaka mandray baiko ara-potoana.
Toy izao manaraka izao ny dingana asa vaovao:
(Araka ny Bejing Time)
1. isa-maraina, noho ny baiko vaovao izay mandray karama efa talohan'ny mitataovovonana 12:00 isika, dia mandamina izany ary hijery ny tahiry amin'ny andro iny ihany.
Raha manao ny fandoavana rehefa afaka 12:00 mitataovovonana, dia handamina izany ka jereo ny petrabola ao amin 'ny ampitso.
2. Rehefa avy nandray ny mpamatsy lisitra, raha afaka manao fandoavam-bola ny farany eo anatrehan'i 6:00 hariva, dia afaka an-tsambo ny mba miaraka amin'izay koa hariva.
Raha manao ny fandoavana aorian'ny 6:00 ora hariva, dia an-tsambo ny filaminana amin'ny andro manaraka.
3.For ny baiko izay efa mandray karama, raha Hianao no nanao manampy mba ho vita ny fifandanjana eo anatrehan'i 12:00 mitataovovonana, dia handefa anareo ny farany lisitry fonosana miaraka amin'izay koa hariva, ary an-tsambo ny filaminana amin'ny andro manaraka.
Raha Hianao no nanao ny nanampy mba ho vita ny mahay mandanjalanja rehefa afaka 12:00 mitataovovonana, dia handahatra ny nanampy filaminana sy handefa lisitra fonosana farany amin'ny andro manaraka anao sy ny lamina ho an-tsambo avy rehefa avy rahampitso.
Alohan'ny hanaovana ny filaminana, azafady katsaram-panahy handamina ny fotoana araka ny toe-javatra manokana.
Miala tsiny ho an'ireo izay tsy hanahirana nahatonga anao.
Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay.
Kaonty Paypal: julong@julongsteeljewelry.com
Mba andefaso olona with us eo anatrehanao manao ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny Western Union, mba hanamarinana ny mpandray ny anaran'Andriamanitra.
Transfer Bank Information
Tombontsoa Bank Name: HSBC
orinasa name: Jinyun Trade Limited
tombontsoa Bank: 1 Queen ny Road Central, Hong Kong
Tsy misy adiresy an-tsambo ho eto amin'izao tontolo izao.
Nandidy ny entana amin'ny alalantsika no alefa amin'ny EMS na ny TNT na ny DHL, na FEDEX na UPS.
Dia mampahafantatra anao amin'ny fanaraha-maso No. amin'ny alalan'ny e-mail raha vao ny filaminanareo dia nalefa avy rehefa mahazo izany avy amin'ny orinasa mazava.
Ny adiresy an-dalambe no takina ho an'ny lahateny.
Varony dia ho voavonjy Malagasy Air-mazava isan-trano, izay eo ho eo 3-5 maka andro fiasana.
Fanaterana ny fotoana tsy ahitana ny fikarakarana ny fotoana.
Ny vokatra dia alefa avy isan'andro, avy amin'ny Alatsinainy ho Sabotsy, afa-tsy andro fialan-tsasatra. Baiko ny ankamaroan'ny napetraka amin'ny andavanandro dia ho alefa ao amin'ny 2 na 3 andro izany, raha napetraka ny faran'ny herinandro baiko dia nalefa ny Alatsinainy manaraka izao. Hahazo ny e-mail ny fandraisana ho mpikambana amin'ny ampy isa. Efatra amby roapolo ora mandimby anao hahazo ny ampy isa, dia ho afaka manara-maso ny filaminana amin'ny internet ao amin'ny
Fotoana fanaterana Samy hafa arakaraka ny firenena ny toerana.
jinyun firavaka Manamafy orina ny fiaraha-miasa mafy amin'ny fandefasana entana efatra lehibe rehetra ireo orinasa: DHL, UPS, FEDEX sy TNT mba hanome matihanina maneran-tany isan-trano fanaterana.
Items dia ho alefa ao amin'ny raharaham-barotra andro manaraka rehefa efa avy amin'ny teny anglisy avy. Amin'ny ankapobeny, dia mety ho tokony ho 3-5 raharaham-barotra andro ho an'ny delivery, arakaraka ny lahateny samihafa midika fa mifidy. Isika tsy tompon'andraikitra amin'ny ratsy na undeliverable adiresy. Mba ho azo antoka ny sambo adiresy marina sy deliverable.
Tsy mamela anao manara-maso ny filaminana amin'ny tsindry ny totozy. Raha ny fandefasana hamafisina, dia hahazo ny fanaraha-maso fandraisana ho mpikambana maro ao amin'ny e-mail.
Mandra-pahoviana no tsy haka noho ny zavatra mba hahatratra ahy?
Mariho tsara fa ny raharaham-barotra andro, manavaka Sabotsy, Alahady sy Public Fety, dia kajy eo amin'ny fe-potoana fanaterana. Amin'ny ankapobeny, dia mitaky ny 3-5 andro ny fanaterana raharaham-barotra.
Ahoana no manara-maso ny entana?
Ny fividianana an-tsambo izahay alohan'ny faran'ny andro manaraka rehefa raharaha efa anglisy-out. Izahay mandefa e-mail amin'ny ampy isa mba azonao atao ny manamarin ny fandrosoana ny lahateny am-mitondra 'tranonkala.
Inona no tokony hataoko raha tsy tonga ny sambo?
Masìna ianao, hamela ny raharaham-barotra ny 10 andro noho ny zavatra mba ho voavonjy. Raha mbola tsy tonga, azafady hanohina antsika amin'ny fipihana ny "Contact Us" bokotra eo amin'ny tranonkala. Dia miverina aminao haingana.